शीर्ष नेताहरूलाई भ्याइनभ्याइ, कुन नेता कहाँ ? - Nepali Headlines,Nepal News, Nepali News, News Nepal
शीर्ष नेताहरूलाई भ्याइनभ्याइ, कुन नेता कहाँ ?
१७ मंसिर, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनाव मिति नजिकिँदै गएका बेला शीर्ष नेताहरू चुनावी अभियानमा व्यस्त भएका छन्।
प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु शनिबार दिनभर आमसभामा व्यस्त भए । केही नेताले त पाँच ठाउँमा पुगेर आमसभामार्फत आफ्नो पार्टीका पक्षमा मतदान गर्न मतदातालाई आग्रह गरे।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा शुक्रबारदेखि ७ नम्बर क्षेत्रमा छन् । उनी चुनावपछि मात्र काठमाडौं फर्कने कार्यक्रम तय भएको प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार गोविन्द परियारले बताए । शनिबार उनी कञ्चनपुरका ३ वटा ठूलाठूला सभामा व्यस्त रहे । उनी कञ्चनपुरको बेलौरी, झलारी र महेन्द्रनगरमा गरिएको ३ ठूला सभामा सहभागी भए । उनीसँगै नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय नेताहरू रमेश लेखक, एनपी साउद र दिलेन्द्र बडू पनि विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए । देउवा आइतबार गृहजिल्ला डडेलधुरा जाने भएका छन् । उनले एकै दिन दुईवटा सभामा भाग लिनेछन् । अब उनी डडेलधुरामा मतदान गरेर फर्कनेछन्। आजको नागरिकमा खबर छ ।
यसैगरी एमाले अध्यक्ष केपी ओली शनिबार झापा ,मोरङ, सुनसरी र उदयपुरका ४ वटा सभामा व्यस्त रहे । उनी शनिबार बिहान झापाको कमल गाउँपालिकाको मंगलबारे, दिउँसो मोरङको उर्लाबारी, सुनसरीको दुहबी र उदयपुरको गाईघाटमा आयोजित आमभसामा प्रमख अतिथि भए । उनी आइतबार मोरङको विराटनगर र चितवनको माडीमा आयोजना गरिने आमसभामा सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको ओलीका प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीले बताए।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि शनिबार दिनभर व्यस्त रहे । उनी शनिबार बिहान काठमाडौं २ मा एमालेका प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार माधव नेपाललाई सघाउन काठमाडौंको पेप्सीकोलामा आयोजित आमसभा र घरदैलो कार्यक्रममा व्यस्त रहे । यसैगरी दिउँसो ललितपर ३ को सुनाकोठीमा आयोजित आमसभामा सहभागी भए । शनीवार नै उनी कपिलवस्तु पुगेका छन् । उनी आइतबार र सोमबार गृहजिल्ला चितवनमा व्यस्त हुने कार्यक्रम तय भएको माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले बताइन्।
कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल शनिबार दिनभर आपनो गृहजिल्ला तनहुँमा व्यस्त रहे । उनी शनिबार भानु नगरपालिका विभिन्न ठाउँमा गरिएका कोणसभा तथा घरदैलो कार्यक्रममा व्यस्त रहे । यस्तै उनी गाठोरे, खहरे, कुमालगाउँ, तुरतुरेलगायतका ठाउँका घरदैलो कार्यक्रममा सहभागी भए।
यसैगरी एमालेका नेता माधव नेपाल शनिबार दिनभर काठमाडौं २ का विभिन्न ठाउँमा व्यस्त रहे । कांग्रेसका नेता प्रकाशनमान सिंह पनि काठमाडौं १ मा आयोजित कोणसभाका सहभागी भए।
PreviousPresident – Udhauli festival-best wishes
Nextनिर्वाचन सम्पन्न नभएसम्मका लागि मदिरा बिक्री वितरण तथा सेवनमा रोक